Kedụ ka aga-esi eme ụgbọ elu ụgbọelu PETE N'oge ụbọchị Eid? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulKedụ ka aga-esi eme ụgbọ elu ụgbọelu PETE N'oge ụbọchị Eid?
Kedụ ka aga-esi eme ụgbọ elu ụgbọelu PETE N'oge ụbọchị Eid?
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metrobus, Turkey
Uzo esi eme njem IETT na ubochi oriri
IETT ga-aga n'ihu na-ebugharị ndị njem n'oge ezumike ahụ. N’ụbọchị oriri a ga-etinye n’oge ọ bụla, a ga-ebugharị ndị njem n’ahịrị bọs dịka usoro Satọdee dị na Satọde na n’ụbọchị ndị ọzọ dịka usoro Satọdee si dị. E kesara ụgbọ ala 4 maka ụlọ ọgwụ maka ụbọchị 186. N’ahịrị nke Metrobus, a ga-enwe ụgbọ elu ahụ na nkeji 3 n'ụtụtụ na mgbede.
Ugbo elu 498 n'akụkụ ndị Europe na ndị Anatolian ga-aga n'ihu n'ehihie na n'oge oriri. A na-eme atụmatụ ịhazi ụgbọ elu 608 na ugbo ala 13 na Satọde. Na Sọnde, Mọnde na Tuzdee, a ga-ahazi ụgbọ elu 642 498 na ugbo 527 ọbụladị 8. N'ọnọdụ ebe ịdị obosara dị na ahịrị, a ga-ebelata njupụta nke edoghi metụtara ụgbọ ala ga-ebelata. Ndị bi na Istanbul nwere ike ịhọrọ okporo ụzọ na ụzọ ụzọ ụgbọ ala ha chọrọ iji rụọ ọrụ. iett.gov.t bụ nwere ike iru site na.
N’ahịrị nke Metrobus, a ga na-enwe ụgbọ elu ugboro ugboro n'ụtụtụ na mgbede. Na Satọde, Mee 23, a ga-enwe njem ọ bụla nkeji 06 n'agbata elekere iri na isii ruo elekere iri nke iri ọ bụla, nkeji iri ọ bụla dị n’agbata 10 na 3, nkeji atọ ọ bụla dị n’agbata afọ iri na isii na iri abụọ. A ga na-eme njem kwa nkeji iri abụọ n’agbata 10 ruo 16.
Na Sọnde na ụbọchị ndị ọzọ nke oriri, a ga-enwe ụgbọ elu ọ bụla nkeji 06 n'etiti 10 na 3, Tuesday na Wednesde, minit 10 ọ bụla dị n'agbata 16 na 10, na nkeji 16 ọ bụla n'etiti 20 na 3. N’agbata afọ 20 na 24, ị ga-eme njem ọ bụla na nkeji iri.
Mee 23 Satọde Mee 24 Sọnde Mee 25 Mọnde Mee 26 Tusde
IETTekenyela ụgbọ ala maka ụlọ ọgwụ maka ụbọchị 4 a ga-egbochi. Onu ogugu ugbo ala 2 ka enyere ndi mmadu 26, onwe 28, ulo iri-ato na Istanbul n’ime ubochi 4. Gbọ ala ndị ahụ ga-enyere ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ụzọ mgbe ha na-alọta ma na-alọta ọrụ.
Ego ezumike nká amalitela ụgwọ ịkwụ ụgwọ ..! Yabụ kedu ka a ga-esi akwụ ụgwọ?
IETT, Ememme a dị na Mesa
Nkwukọrịta IETT na Nọmba Ekwentị Kpọtụrụ IETT
IETT Uzo ndi uwe ojii nke IETT yi
Roadzọ Ọhụụ maka Engelsizmir na Corona Days
Ihe nkiri ụgbọ ala na Istanbul Corona Days Morale
418 puku nari asiflt na okporo ụzọ Izmir na Corona Days
ETzọ IETT na Curfews
Busgbọ ala ndị EGO ga-enye ụmụ amaala nwere ikike n'efu
Taa na History: 23 May 1933 na ndepụta Filyos-Eregli
Njikọ ụgbọ na IETT, Pendik YHT Station
Oziọma na goos! Njegharị 250 nke Line Line ga-ada na ọkara Awa
Etu aga esi zụta Tiketi Trainụ nwere koodu HES? Etu esi enweta koodu Hes? Nye ikike njem HES Koodu…
Otu esi eme 2020 LGS Center Exam ..! Lee Ngbanwe niile
Emeghari njem nke NYT bidoro emume emume ọhụụ
Gịnị bụ ụlọ ahịa ePttAVM? Kedu ka ePttAVM si arụ ọrụ? Etu esi emepe ebe ahia ePttAVM?